Efa manana laharana maitso ihany koa ny Croix Rouge Malagasy (CRM) hahafahana miantso azy ireo maimaimpoana. 034 30 811 12, io no hahazoana ny CRM izay manampy ihany koa amin’ny fanentanana amin’ny ady amin’ny fiparitahan’ny tsimok’aretina covid-19 izao. Efa nahazo toromarika avokoa ireo mpilatsaka an-tsitrapo 9.200 manerana ny Nosy amin’ny tokony hanaovana fanentanana sy fampahafantarana ny olona ny maha areti-mandoza ity covid-19 ity raha ny nambaran’ny tompon’an­draikitra. Hatreo ihany no andraikitry ny Croix Rouge Malagasy fa tsy mbola mandray anjara amin’ ny fitondrana ny marary izy ireo raha ny fanazavana hatrany.
Joti-Special, io no lalao iraisan’ny skotisma maneran-tany androany hatramin’ny alahady. Samy manao skoto an-trano avokoa ny skoto rehetra maneran-tany. Hifanao fotoana amin’ny internet avokoa izy ireo. http://jotajoti.info/fr no hanaovana ny fisoratana anarana amin’izany. Maro karazana ny lalao iarahana amin’irzo skoto manerana an’izao tontolo izao. Fotoana hahafahana mandefa horonan-tsary fohy hanehoana talenta ohatra amin’ny alalan’ny hira na dihy na teknika skoto na tononkalo….Hifaninanana amin’ny skoto hafa any amin’ireo firenena marobe ity lalao iraisan’ny skoto izy.
Nahazo anarana Irondro ilay rivodoza ao amin’ny Rano­masimbe Indianina. Omaly, tany amin’ny 2.186 km atsi­- nan’Antalaha no nisy ny foibeny. Tsy hisy fiantraikany amin’ny toetr’andro eto Madagasikara anefa ity rivodoza ity ary miha manalavitra ny Nosy hatrany ny diany. Mitondra rivotra 65km isan’ora izy ary arahina tafiotra 90km isan’ora. Mikisaka mianatsimo ny diany.